बढ्यो सुनको मूल्य, कतिमा भइरहेको छ कारोबार ? जान्नु हो। « गोर्खाली खबर डटकम
बढ्यो सुनको मूल्य, कतिमा भइरहेको छ कारोबार ? जान्नु हो।
काठमाडौँ- नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य बढेको छ ।साताको दोस्रो दिन आज आइतबारको तुलनामा सुनको मूल्य १०० रूपैयाँले बढेको हो ।आज छापावाला सुन प्रतितोला ८९ हजार ६०० रूपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
यस्तै तेजाबी सुन आज ८९ हजार १५० रूपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासङ्घले जनाएको छ ।चाँदीको मूल्य आज स्थिर छ । आज चाँदी प्रतितोला १२७५ रूपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ ।
काठमाडौँ । हजुरहरुमॉ यस्तो समस्या छ भनेँ ढाड दुख्ने समस्या छ ? कपुर हुनेछ यसरी अचूक औषधि र हेर्नुस स् कपुरको प्रयोग हॉमीहरुले पूजापाठको लागी धेरैले प्रयोग गर्ने गरेका छौँ र यसलाई औषधिको रुपमा सहि तरिकाले प्रयोगमा ल्याउन सकिएमा विभिन्न बिरामीको उपचार सजिलै गर्न सकिन्छ र यदि कसैलाई दम रोगमा यो अचूक औषधि साबित हुनेछ्र
पुरानो खोकीमा: सूठो,पिप्ला र मरिच एक्एक भाग तथा ३ भाग कपुर पानी हालेर केराउको गेडा जत्रो गोली बनाउने एक्एक गोली दिनमा खिनमा तीन–चार पटक चुस्ने गरेमा पुरानो खोकी ठीक हुन्छ ।
यी पाँच संकेतलाई नगर्नुहोस् वेवास्ता, नत्र दिमागले गर्न छोड्छ काम
सख्खर : स्वास्थ्यलाई फाइदै फाइदा
खोकी लागेमा: साधारण खोकीमा कपुर बालेर धूवाँ सुँघ्नाले ठीक हुन्छ ।
आउँ बाथ भएमा दुई चक्की कपुर र आधा चम्चा सूठो एक ग्लास पानीमा पकाएर खाने बेलामा खाने गरेमा जीर्ण,आउँ,बाथ सबै ठीक हुन्छ ।
पुरानो बाथ लागेमा: एक डाडु रायोको तेलमा एक चम्चा कपुर तताएर मालिस गर्दा पुरानो गठिया बाथ आदि ठीक हुन्छ ।
निद्रा नलाग्नेमा,मुर्छा पर्ने रोग लागेमा: फुराएको हिङ एक भागमा कपुर एक भाग मिसाएर केराउ जत्रो गोली बनाएर दुई्दुई गोली तातोपानीसंग खाँदा निद्रा लाग्छ र उन्माद् मुर्छा पनि ठीक हुन्छ ।